Nkwado Maka Ụbọchị Ndịigbo Ebirile Ọkụ na Boston – Ụwandịigbo
Posted April 16, 2019 April 16, 2019 Omenka
Ndị Igbo bi na Boston, Massachusets nke dị na mba Amerika akwadowele maka mmemme ha ji akwalite omenala Igbo. Mmemme a nke ha kpọrọ Ụbọchị Ndịigbo bụ mmemme ha na-eme kwa afọ nʻama egwuregwu Franklin Park nke dị na Boston. Mmemme nke afọ 2019 ga-adị nʻụbọchị ọnwa Ọgọịsịtị ga-adị na mkpụrụ ụbọchị iri.
Nʻokwu ya mgbe ọ na-akọwa maka mmemme a, Eze Ndịigbo na Boston bụ Okaa Ejike Eze (Omenka nke Mbu nʻUdi) kwuru na Ụbọchị Ndịigbo nke afọ a ga-akpụọkụ nʻọnụ ma pụkwaa iche nʻihi na ọ bụ nke ikpaazụ ya na ndị otu ọchịchị ya ga-achịkọba tupu ha ahapụ ọchịchị. O kwuru na ya na-atụ anya na ọhanaeze ga-apụta nʻuju bịa nyere aka kwalite omenala Igbo.
Ọnụ ọma na-ata akwụ ọkpụrụkpụ, ọ dị ka ọ bụ ọsụkwụ. Mmemme iji kwalite omenala Igbo malitere wuwe ka ọkụ ụgụrụ kemgbe ndịigbo bi na New England họpụtara Omenka dịka Eze Ndịigbo na New England afọ isii gara aga. Ọ bụ mgbe a ka ndịigbo niile bi na mpaghara Amerika a malitere gbakọwa ọnụ nʻama egwuregwu iji mee mmemme e ji echete omenala Igbo. A sị na awayị tọwa ụtọ, a bachanwekwuo ya ji. Kwa afọ, otu na-achịkọba ya bụ mmemme nke onyeisi ha bụ Ichie Bonny Chiuba Chibueze (Ọzọ Akụolisa na Nise) na-ewepụta ihe ọhụrị iji mee ka ya bụ mmemme na-ekpo ọkụ.
Mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ, Ọzọ Akụolisa sịrị na ya na ndị otu ya na-eme ihe niile ha nwere ike iji hụ na mmemme a gara nke ọma. Ọ sịrị na mmọnwụ kara aka dịka Ijele nakwa ndị ọzọ ga-esi Ala Igbo wee bịa. O kwukwara na ndị eze na ndị nze na ọzọ ga-esi ebe dị iche iche bịa sonye na mmemme ahụ.
Ihe karịrị nde mmadụ ise sonyere na mmemme a nʻafọ gara aga.
⟵Ọsọ Abiola Esula nʻAPC
Gọvanọ Obiano Ekwela Nkwa Nde Naịra Ise Maka Onye Gbara Ama Gbasara Ọnwụ Maazị Igboka⟶